Nahafaty olona 170 ireo fanapoahana baomba mialoha ny fifidianana ao Pakistan, mampihemotra ny fanantenana isian’ny fandrotsaham-bato milamina · Global Voices teny Malagasy
Nahafaty olona 170 ireo fanapoahana baomba mialoha ny fifidianana ao Pakistan, mampihemotra ny fanantenana isian'ny fandrotsaham-bato milamina
Voadika ny 20 Jolay 2018 7:58 GMT
Manasonia taratasim-pifidianana nandritra ny fifidianana ankapobeny tao Pakistan taona 2013. Saripika: Flickr/Olaf Kellerhoff, CC BY-NC 2.0
Hanatontosa fifidianana ankapobeny i Pakistan amin'ny 25 jolay taorian'ny herinandro nanjakan'ny fanapoahana baomba manao ho lasibatra ny fivoriana politika tany amin'ny faritanin'i Khyber Pakhtunkhwa sy Balochistan niteraka tahotra amin'ny mety hisian'ny herisetra bebe kokoa sy isian'ny famindram-pahefana fenofeno tsilo.
Nahafatesana olona mihoatra ny 170 ny fanafihana, ao anatin'izany ny kandidà malaza toa an'i Haroon Bilour sy Siraj Raisani, tao anatin'ny fanentanana izay anisan'ny nilamina indrindra. Fanafihana iray monja, tamin'ny 13 jolay nandritra ny famoriam-bahoaka nataon'ny Antoko Awami Balochistan, dia efa nahafatesana olona 129 sy naharatrana olona am-polony. Iny no fanafihana nahafatesana olona indrindra tao Pakistan taorian'ny fitifirana tsy mitsahatra nahafatesana olona 141 tao amin'ny sekoly iray tantanin'ny tafika tao Peshawar, tamin'ny desambra 2014.
Hifidy olona miisa 342 hapetraka ao amin'ny Antenimieram-Pirenena ny firenena ahitana mponina miisa 208 tapitrisa, ary manantena ny mbola hahazo ny maro an'isa ao anatin'ny fehim-potoana faharoa amin'izany ny Ligy Miozolomana Pakistan. Voahozongozona io antoko io tamin'ny taona 2017 raha voampanga ho nividy efitrano lehibe tamin'ny vola niodina avy ao Pakistan, tantara iray nanafintohina naporitsaky ny famotoran'ny Panama Papers ny mpanorina ilay antoko sady Praiminisitra tamin'izany fotoana izany.
Miatrika fifaninanana mamaivay avy amin'ilay mpilalao cricket lasa mpanao politika Imran Khan, avy ao amin'ny antoko Pakistan Tehreek-i-Insaf (Hetsika Pakistan ho amin'ny Rariny) ny antoko Ligy Miozolomana.
Lasa nanokatra indray ny tsiaron'ny fifidianana tamin'ny taona 2013 ireo fanafihana vao haingana ireo, raha matetika nanao lasibatra ireo fivoriana politika ireo ny mpanao viveryny ainy, izay nahafatesana olona mihoatra ny 200, olona 64 no maty nandritra ny androm-pifidianana tamin'izany fotoana izany. Ireo antoko politika laika, toy ny Antokom-bahoakan'i Pakistan, ny Antoko Awami Nasionaly ary ny Hetsika Mohajir Muttahida Quami no tena nataon'ny Taliban Pakistaney, milaza ho nanao ireny fanafihana ireny, lasibatra tamin'izany fanafihana izany. Ny tahotra isian'ny herisetra tahaka izany no nahatonga ireo antoko telo ireo hanakona ny fanetanam-bahoaka, hampitsahatra ny famoriam-bahoaka, fa namindra ny fanentanana ho any amin'ny media sosialy.
Na izany aza dia nilamina ihany ny famindram-pahefana tamin'ny taona 2013 nifanaovan'ny Antokom-Bahoakan'i Pakistan sy ny Ligy Miozolomana Pakistan. Talohan'ny taona 2008, dia tsy nisy governemanta demaokratika nahavita ny dimy taona tamin'ny fitantanana an'i Pakistan.
Nijotso ihany koa ny herisetram-pitolomana tao anatin'ny taona vitsivitsy izay taorian'ny fanafihana ara-miaramila tany Avaratra Andrefana, izay niasan'ny vondrona toy ny Tehrik-i-Taliban Pakistan, Lashkar-e-Islam, al-Qaeda, ary ny ISIL-Khorasan. Misy na izany aza no mbola miezaka ny hanao fanafihana, ampian'ny avy any ampitan'ny sisintany avy any Afghanistan.
Fizotran'ny fotoana nisian'ny herisetra talohan'ny fifidianana
3 Jolay 2018: Fipoahana tao an-tanànan'i Razmak, tany Waziristan Avaratra, izay naharatrana mafy olona 10 sy maro hafa antonontonony ny ratra nahazo azy. Nanatrika ny fanokafana ny foiben'ny fanetanana ho an'i Malik Aurangzeb Khan, kandidà miarama amin'i Pakistan Tehreek-e-Insaf ry zareo. Tsy nisy vondrona nilaza ho tompon'antoka tamin'io fanafihana io.
7 Jolay 2018: Fipoahana tao amin'ny fivoriam-bahoakan'ny antoko farany havanana Muttahida Majlis-i-Amal (Vaomiera Tafarain'ny Fihetsehana) tao an-tanànan'i Takhti Khel, tany Avaratra Andrefana, nahafatesana olona fito, ka anisany ny mpitarika ny antoko sady mpifaninana Malik Sherein. Ny tatitra voalohany no namoaka fa natao tamin'ny môtô iray ny vanja ka io no nipoaka akaikin'ny fiara nitondra ny kandidà.
10 Jolay 2018: Mpanao vivery ny ainy iray no namono nahafaty ny mpitarika ny Awami National Party (ANP na Antoko Awami Nasionaly), ny mpisolovava Haroon Bilour, sy olona 19 hafa tao amin'ny famoriam-bahoaka kelikely tao an-tanànan'i Peshawar. Io Bilour io dia zanak'i Bashir Ahmed Bilour, mpitarika ambony ao amin'ny ANP izay maty koa nandritra ny famononan'ny mpanao vivery ny ainy azy tamin'ny famoriam-bahoaka iray tamin'ny taona 2012. Ny Taliban Pakistaney no nilaza ho tompon'antoka tamin'izany fanafihana tamin'ny alalan'ny vivery ny ainy izany.
Nanameloka ny famonoana an'i Haroon Bilour ny Lehiben'ny Tafika ny Jeneraly Qamar Javed Bajwa:
Maneho ny alahelony amin'ny fianakaviana Bilour sy ny ANP amin'izao fanafihana mpampihorohoro mendrika melohina manao lasibatra an'i Haroon Bilour sy ny niharam-boina hafa izao ny COAS”. Miady amin'ireo herin'ny tsy tia fifanamanana tsy te-hitelina Pakistan milamina sy marin-toerana izahay. Tsy kivy amin'izany izahay ary enga anie handresy azy ireny ny Tafika” COAS
Tsy mitsahatra ny fanafihan'ny vondrona mpitolona mitam-piadiana any Avaratra-Andrefana manao ho lasibatra ny ANP, izay mitondra ny faritanin'i Khyber Pakhtunkhwa tamin'ny taona 2008 ka hatramin'ny taona 2013. Mpanohana ny ANP ampolony, sy mpitarika antoko politika maro, no maty nandritra ny fifidianana taona 2013.
13 Jolay 2018: Fipoahana iray tao amin'ny famoriam-bahoaka tany an-tanànan'i Bannu any Avaratra Andrefana no nahafaty olona efatra farafahakeliny sy naharatrana olona 32. Izany fivoriana izany dia nampiantranoin'i Akram Khan Durrani, lehiben'ny minisitra provinsialy teo aloha sady mifaninana hahazo toerana amin'izao fifidianana ho avy izao. Tsy tratra tamin'izany fipoahana izany i Durrani.
13 Jolay 2018: Tany Atsimo-Andrefana tao an-tanànan'i Dringarh, tokony ho 35km atsimon'ny renivohi-paritanin'i Balochistan ao Quetta, nisy mpanafika nanao vivery ny ainy iray nanao lasibatra ny fivoriana iray nataon'ny Balochistan Awami Party (BAP), nahafaty olona 129 farafahakeliny ary naharatrana olona am-polony. Nilaza ho tompon'antoka tamin'izao fanapoahana baomba izao ny Fanjakana Islamika (ISIS), nefa tsy afaka nanaporofo izany.
Anisan'ny maty tamin'izany i Siraj Raisani, izay mifaninana ho ao amin'ny antenimieram-paritanin'i Balochistan sy heverina fa itempoan'ny fon'ny politikam-paritany.
Izany fanapoahana baomba izany no fanafihana nahafatesana olona be indrindra tao Pakistan taorian'ny nanafihan'ny Taliban Pakistaney ny sekoly-miaramila iray tao Peshawar tamin'ny Desambra 2014, nahafatesana olona 141, ary ankizy ny 132 amin'izany.
16 Jolay 2018: saika maty tamin'ny fanafihana nataon'andian'olona mitam-piadiana nitifitra azy tao amin'ny trano fandraisam-bahiiny iray tao Chaman, mbola ao amin'ny faritanin'i Balochistan ihany ny mpitarika ny Antoko Awami Nasionaly, Daud Khan Achakzai. Tifitra roa no nahazo ny tanany ankavanana. Nandositra ny toerana notafihana ireo mpanafika rehefa naratra ny mpitarika.
Mieritreritra izay mety ho anton'izao fanafihana izao ao amin'ny media sosialy ny olona:
Niverina tao Pakistan indray ny herisetra rehefa nanomboka ny fanentanana. Misy ny mieritreritra fa fikasana hanimbana ny fizotran'ny fifidianana izao. Inona moa izany no mety ho tombony azon'ny mpampihorohoro amin'ny fanemorana ny fifidianana ao Pakistan?
Umair Javed manao matoandahatsoratra iray ao amin'ny The Dawn:
Ampiasaina matetika eo amin'ny ambaratongam-piarahamonina hisorohana na hanerena ny safidy sy fiovana amin'ny voka-pifidianana ny tetikady fampitahorana sy ny herisetra, izay matetika iraisana tsikombakomba amin'ny manampahefana ao an-toerana.
Ny tena mampamaivay ny tamin'ny taona 2018 ity dia ny haavon'ny fifaninanana izay hita eo amin'ny fanamafisana orina ireo kandidà roa matanjaka ao amin'ny (PML-N [Ligy Miozolomana] vs PTI [Pakistan Tehreek-i-Insaf — Hetsika ho amin'ny Rariny], na ny PML-N vs tsy miankina), fa tsy amin'antoko telo na efatra. Amin'ny toerana kely, mikaonty be ny safidy tsirairay sy ny vondro-tsafidy iraisana, ary ny herisetra no voarakitra ho fomba matanjaka hanapahana na hampiraisana vato fotsy.
Ho fiarovana ny biraom-pifidianana, vata-miaramila miisa 371000 no hapariahan'ny tafik'i Pakistan amin'ny androm-pifidianana, efa ho avy telo heny noho ny isa tamin'ny taona 2013. Ho ampy ve izany hisorohana ny herisetra mandritra ny fifidianana?